Google Webmaster Central Enweta Nnukwu Nkwalite | Martech Zone
Ka mụ na onye ahịa na-arụ ọrụ n'ụtụtụ a, abanyere m Google Webmaster Central na-a lee anya na ndá »‹ kará »‹ ajuju njiká »driving kwá» driving okporo á »traffic zá». Ihe m choputara bu otu uzo nke bara uru!
Kama nanị ịnye isiokwu, ọnọdụ na pịa-Google, kwalitere interface ka interface Google Analytics-style. Ebe ọ bụ na ogo dị ugbu a dịgasị iche dabere na profaịlụ ọchụchọ onwe gị, Google ugbu a na-enye gị ọtụtụ ọnọdụ nke achọtara URL gị, yana ọnụọgụ nke mmetụta na ọnụọgụ pịa.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eleghara ọkwa ọchụchọ ha anya na ọnụego pịa-site na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ (SERP). Dị nnọọ ka ị ga - esi bulie ibe gị iji mee ka mgbanwe dịkwuo elu, ị ga - ebuli aha peeji gị na nkọwa meta iji mee ka mgbanwe gbanwee. Ọ bụrụ n ’ị b ụ # 1 rue # 3 ma na-erughị 10% nke clicks, inwere ọrụ ị ga-arụ. Ikwesiri inweta 50% na elu!
Ihe ngosi ohuru a bu ihe ngosi di egwu nke data. Ozugbo m nwere ike inyocha peeji a na onye ahịa m n'ụtụtụ a, anyị nwere ike ịhụ ohere dị ịtụnanya dị n'ihu anyị maka ịkwọ ụgbọ elu dị elu nke saịtị ahụ yana njikarịcha na ogo.
Edozila nsogbu nchịkọta iji bulie saịtị gị maka mgbanwe - weghachite ya ma hụ na ị na-ebuwanye ụzọ nweta engines ọchụchọ. Nchịkọta na-enye gị nkọwa maka ndị ọbịa na-pịrị-na-abụghị nke ndị a hapụrụ!
Tags: igwefoto +hashtagmobile tinye-na-cart udunkwusamfeSliderstream
Ee. Ahụrụ m mgbanwe na nso nso a. Obi di m utoooooooo. Mgbe ahụ, m lere ya anya karịa. Achọrọ m na ọ ga-eme ihe ole na ole site na data dị ka ịgwa m ozi Google nke ogo ahụ na-abịa.
Ọ gwụla ma saịtị m ga-ejikọrịrị peeji 1 maka okwu ahụ bụ "zombies," "Hoolọ ezumike," "Wrigley Field," na "Karen Gillan."
M dere post n'elu SEOBoy ma á »bá» you rá »wan na á» ‹chá» rá »na-a lee anya (mba nke a bá» a ghá »‹ a ala ngwangwa inweta okporo á »Fin zá». http://bit.ly/de6Ot9).
Achọrọ m ịgbada Indy wee hụ y'all.